Iibinta hubka oo laga mamnuucay magaalada Boosaaso. – Radio Daljir
Iibinta hubka oo laga mamnuucay magaalada Boosaaso.
Bosaaso, April 12- Guddiga nabadgalyada ee gobolka Bari ayaa soo saaray go?aanno lagu mamnuucayo hubka lagu iibiyo suuqyada magaalada Bossaso iyo goobaha lagu sameeyo dukumintiya been abuurka ah.
Go?aanadan ayaa soo baxay iyadoo ay magaalada Bossaso iyo guud ahaanba deegaanada Puntland kusoo badanayaan dilalka qorshaysan, ee lala beegsanayo dadka wax?galka ah.
Awaamiirtan ayaa timid ka dib shir jaraa?id oo maanta (Salaasa) magaalada Bossaso ku yeesheen guddiga nabadagalyada ee gobolka Bari oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka, Sh. C/xaafid Cali Yuusuf, taliyaha qaybta bileyska Siciid Jaamac Haaruun iyo duqa degmada Maxamuud Faarax Beeldaaje iyo xubno kale.
Guddiga ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Bossaso, islamarkaana ciddii u hoggaansami wayda laga qaadayo tallaabo sharciga waafaqsan.
Waa go?aankii labaad oo muddo ka yar 24 saac ay soo saaraan guddiga nabadgalyada ee gobolka Bari, waxaana ay xalay guddigu mamnuuceen in baabuurta waawayn ee xammuulku ay dad rakaab ah qaadaan marka ay raranyihiin.
Salmaan Jamaal Siciid ?Kaka?